မဆုမွန်: အိမ်မက်ထဲက သူငယ်ချင်း
မေ့ထားတာကြာပီဖြစ်တဲ့ တချိန်တုန်းက သိပ်ချစ်ခဲ့ရသော ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းကို အိပ်မက်ထဲတွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း မြင်မက်ခဲ့သည်. အိပ်မက်ထဲတွင်ပင် ကျမတို့နှစ်ယောက် အရင်ကအတိုင်း ပြန်မဖြစ်ခဲ့ကြပါ.
အိပ်မက်သည် ပြင်ပနှင့် ထပ်တူကျတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ပေးနိုင်ပါသလား အိပ်မက်တွေကို ပြောင်းပြန်ယူရသည်ဟု လူကြီးတွေ ပြောခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိနေသည်.
ထူးထူးဆန်းဆန်း သူမကို စ်ိတ်မစွဲပါဘဲ မက်ခဲ့သည့်အိပ်မက်ထဲတွင် သူမနှင့် ကျမသည် စိမ်းကားအေးစက်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်. အပြင်မှ သူမနှင့် ကျမရဲ့ စိမ်းကားအေးစက်မှုသည် အိပ်မက်ထဲတွင်လဲ ထပ်တူကျသည့်ခံစားချက်ကို ပေးပါသည်. အိပ်မက်ထဲမှ ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ စိမ်းကားအေးစက်မှုသည် အိပ်မက်က လန့်နိုးချိန်တွင်ပင် အဲ့ဒီခံစားချက်က ပြယ်ပျောက်မသွားပါ. ခါးသီးသည့် အရသာကို ပါးစပ်ထဲတွင်ပါ ခံစားခဲ့ရသည်.
သူမက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးသည့် နိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပီး ကျမကတော့ ဗမာစစ်စစ် ဖြစ်သည်. ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို တွေ့တဲ့သူတိုင်းက ဇဝေဇဝါနှင့် အမြွှာတွေလားလို့ မေးခဲ့လျင် ကျမက ဂုဏ်ယူစွာနှင့် ဟုတ်သည်လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးသည်. ကျမ သူမကို သိပ်ချစ်ပါသည်. ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ခိုင်မြဲသည့် ချစ်ခင်မှုသည် ရေရှည်တည်တံ့မည်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့ခြင်းသည် လောကဓံကို အာခံရာရောက်ခဲ့သည်.
ရုတ်တရက် သူမရဲ့ စိမ်းကားအေးစက်လာမှုကို သတိထားမိသည့် တစ်နေ့တွင် ကျမနှင့် သူမ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေခဲ့သည်. ကျမရဲ့အမေးတွေကို သူမက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စွာ မေးတစ်ခွန်း ပြောတစ်ခွန်း ပြောနေခဲ့သည်. ကျမ ဝမ်းနည်းလာသည်. ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးသည် ကျမကို ဘာအတွက်များ စိတ်ဆိုးနေခဲ့ပါသလဲ. ကျမ အကြာကြီး ငိုင်နေမိပီးမှ သူမကို စတင် တောင်းပန်ခဲ့သည်. ငါ မသိလိုက်ပေမဲ့ နင် စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုရင် ငါတောင်းပန်တယ်. ငါမှားခဲ့ရင်လဲ ငါတောင်းပန်တယ်. ဘာများဖြစ်နေသလဲ. သူမရဲ့ မျက်နှာပေးသည် ကျမအသည်းကို ဓားနဲ့မွှန်းသလို ခံစားရသည်. ကျမ မျက်ရည်ကျသည်ကို သူမက တိတ်တဆိတ်သာ ထိုင်ကြည့်နေခဲ့သည်.
ကျမက ကော်ဖီသောက်ပီး သူမကတော့ ရေခဲမုန့်စားခဲ့သည်. သူမအတွက် လက်ဆောင် ပို့စကတ်လေးနှင့် အင်္ကျီတထည် ကျမပေးခဲ့သည်. သူမဆီက ပြန်ရခဲ့သည့် လက်ဆောင်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပင်. ဒါတွေဟာ မလိုအပ်တော့ပါ. ကျမသည် တည်ငြိမ်နေခဲ့ပီ. သူမအပေါ် ဘာခံစားချက်မှ ရှိမနေအောင် ကြိုးစားရင်း အမှန်တကယ်ကို တည်ငြိမ်နေခဲ့ပီ. ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးခဲ့ပီဖြစ်တဲ့ ချစ်ကြင်နာမှုအတွက် ဘယ်လို အရာ၊ ဘယ်လို စကားတခွန်းကမှ အရင်အခြေအနေကို ပြန်ရအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါ.
မှတ်မှတ်ရရ ညက အိမ်မက်မက်ခဲ့သည်
(၁၇-၈-၂၀၀၈ တွင် မေ့ပစ်ခဲ့သော ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးအတွက်)
Posted by မဆုမွန် at Tuesday, May 12, 2009
ဒီစာလေးကို တော်တော် သဘောကျမိပါတယ်။ရေးထားတာလေး လှတယ် မ။
အိပ်မက်တစ်ခုကနေ အစပြုပြီး အတိတ်နေ့ရက် တစ်ချို့ဆီကို စာရေးသူက ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ် ... လူနှစ်ယောက်နဲ့ စာဖတ်သူကို မိတ်ဆက်ပေးမယ် ... တစ်ယောက်က စာရေးသူ ..
နောက်တစ်ယောက်က သူသိပ်ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ..
သူတို့နှစ်ယောက် မခွဲအတူ ဆိုးတူကောင်းဖက် လက်တွဲခဲ့ကြတယ် ... သူတို့ ၂ ယောက် သိပ်သံယောဇဉ်ရှိခဲ့ကြတယ် ..
သူတို့ ၂ ယောက်က ယုံကြည်ချက်တွေ မတူကြဘူး ... သူငယ်ချင်းဆိုပေမယ့် တစ်ယောက်က မာနကိုရှေ့တန်းတင်တတ်တယ် ... ကိုယ်မှားနေမှန်းသိပေမယ့် အမှားကို သိတဲ့ အချိန်မှာ အမှန်ကို ဝန်မခံရဲခဲ့ဘူး ..
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ စာရေးသူ .. သူက ယုံကြည်ချက် ပြင်းထန်တယ် .. သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အပေါ်မှာရော .. သူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုက်အဝိုင်းက သူဆက်ဆံနေတဲ့ သူတွေ အပေါ်မှာရော ယုံကြည်မှု တစ်ခုနဲ့ တန်ဖိုးထားဆက်ဆံခဲ့တယ် .. သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ ဘဝတန်ဖိုးတွေ ကြားထဲမှာ ပြိုလဲသွားခဲ့တာကတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်တစ်ခုပေါ့ ... ယုံကြည်ချက် ပြင်းထန်မှုတွေကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရား ပျက်စီးသွားသယောင် ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ သူတို့ ၂ ယောက်လုံး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သံယောဇဉ် မပြတ်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုတာ ပို့စ်အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ " ၁၇-၈-၂၀၀၈ တွင် မေ့ပစ်ခဲ့သော ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးအတွက် " ဆိုတဲ့ စာကြောင်းက ဖော်ပြနေပါတယ် .. တကယ်တော့ စာရေးသူရော ... သူမရော ဒီ့ထက်ပိုပြီး နူးညံ့ခဲ့သင့်ပါတယ် ... ယုံကြည်မှုတွေ အနဲငယ်စီလောက် လျော့ချနိုင်ခဲ့သင့်ပါတယ် .. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ .. တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ အားလုံး အနည်ထိုင်သွားမှာပါပဲ ... အရာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်
ဒီလောက်တောင်ချစ်ခင်ခဲ့ ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်များ တိကနဲ ပြတ်သွားကြရတာလဲနော် ။အထင်အမြင်လွဲနေကြတာမျိုးဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆို ညှိနှိုင်းလို့ ရပါတယ် ။ယုံကြည်မှု ဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးထိ ဖြစ်သွားရတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာဘဲပေါ့ ။
ဟုတ်တယ်. ယုံကြည်မှု ပျက်သွားရင်.. ဘာမှ လုပ်မရတော့ဘူး။ တီချယ်လည်း တူတူပဲ။ :(
အမရယ် .. ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး
ညီမဆိုလည်း ကိုယ်စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လှည့်တောင်မကြည့်တတ်ဘူး ..
ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ မကောင်းဘူးအမရဲ့ ..
တချိန်ချိန်နောင်တတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတွေ့မယ်ဆို စိတ်မကောင်းစရာ
ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ .. တယောက်နဲ့တယောက် အပြုံးတွေနဲ့ပဲ လမ်းခွဲတာကောင်းပါတယ် ..
ခက်ပါတယ် အမရယ် .. သိတော့ပါဘူး .. :D
ဘာဖြစ်တယ်ရယ်တော့မသိဘူးပေါ့လေ.. ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ မဆုရေ.. စိတ်တော့မကောင်းဘူး.. အဲလိုဖြစ်သွားတာ..း(
ဟင်း.. ကြားစကားနဲဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်.. စိတ်မကောင်းစရာပဲ...
ဟုတ်တယ် ယုံကြည်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာ ဘာသာတရားများမှာ သင်ကြားထားတာတွေနဲ့ မဆုမွန်က အညီနေတာပဲ
ယုံကြည်မှုတွေ ပျက်ခဲ့လည်း သံယောဇဉ်နဲ့ ရင်းနှီးမှုကတော့ ကျန်နေတတ်ပါသေးတယ်။ အရင်လို အရာရာတိုင်း တိုင်ပင်ရင်းနှီးအောင် မဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတော့ ဖြစ်လို့ ရမယ်ထင်ရဲ့။ ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး။ ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ ရှိတာလေး ပြောကြည့်တာပါ။ အခါးတွေ ပြေပျောက်ပါစေ။
ယုံကြည်မှု့က အရေးကြီးတယ်နော်.ဇူးလည်း အဲလိုမျိုးပဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်.
ကြားသိရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီလောက်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဒီလို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တစိမ်းတွေလို ဖြစ်သွားတာဟာ ခင်သာခင်ပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှု သိပ်မရှိဘူးလို့ ထင်တယ်။ ပွင့်လင်းမှု ရှိရင် ဒီလို စိတ်ထဲမှာ အစိုင်အခဲ ဖြစ်ကျန်နေလိမ့်မယ် မထင်ဘူး။ မဆုမွန်နေရာမှာ အစ်မသာဆိုရင် နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေး ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုက အဲဒီလိုမမေးကြတော့ မာနပြိုင်နေကြသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလောက်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြားမှာ မာနဆိုတာ လိုအပ်မယ်မထင်ဘူး။
အင်း . တစ်ခါက သယ်ချင်းတွေ နားလည်မှုတွေ လွှဲခဲ့ဘူးတယ် ...
ပို့စ်တိုင်းလိုလို ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ကွန်မန့် မရေးဖြစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး
သတင်းတွေရေးတာကောင်းသလို စာရေးလည်းကောင်းတဲ့ မမဆုမွန်ကို အပြင်မှာတွေ့ဖူးချင်ပါတယ်
ညီမ တွေ့ဖူးချင်တဲ့ထဲ မှာလဲ မမဆုမွန်တစ်ယောက်ပါပါတယ်
ဂျူးဝတ္ထူ တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရသလိုမျိုးခံစားရပါတယ်။ မဆုမွန် စာရေးကောင်းလိုက်တာ..